Izingane zosaziwayo: izinkanyezi ezingu-8 ezaba ngabazali ngo-2017 - Indlela yokuphila 2022
Izingane zosaziwayo: izinkanyezi ezingu-8 ezaba ngabazali ngo-2017
U-2017 ube unyaka omuhle kakhulu emindenini emisha yosaziwayo.
Sifingqa imiphumela ka-2017 ephumayo, ake sikhumbule ukuthi yimuphi osaziwayo ojabulise abalandeli ngezindaba ezinhle zokuzalwa kwezingane.
Ekupheleni kukaJanuwari, umlingisi oneminyaka engu-61 uMel Gibson waba ngubaba okwesi-9. Lena yingane yakhe yokuqala abafana naye nesithandwa sakhe esineminyaka engu-26 uRosalind Ross. Lo mlingisi uphinde abe nezingane eziyisi-8 zemishado edlule.
Entwasahlobo ka-2017, umlingisi u-Tori Spelling, owaziwa ngendima yakhe njengoDonna Martin ochungechungeni lwethelevishini iBeverly Hills, waba ngumama okwesihlanu.
Ingane yesibili yazalelwa emndenini womlingisi uBenedict Cumberbatch, owaduma ngendawo yakhe njengoSherlock Holmes ochungechungeni oludumile lwethelevishini.
Ngo-2017, ingane yokuqala yazalwa imodeli eneminyaka engu-31 ubudala u-Irina Shayk, owabeletha indodakazi, umlingisi oneminyaka engu-42 ubudala waseHollywood uBradley Cooper.
Ngokokuqala ngqa ukuba ngubaba kulo nyaka kanye noGeorge Clooney oneminyaka engu-56 ubudala, owagcina elinde injabulo yomndeni neyoyise. Ehlobo, umkakhe u-Amal wazala amawele kuGeorge - umfana nentombazane, okuthiwa u-Ella no-Alexander.
I-2017 yaba unyaka onezithelo kakhulu kumdlali wasePutukezi futhi wamnika izingane ezintathu. Okokuqala, ngo-June, umama ngokwesivumelwano wabeletha amawele - Eva futhi Mateo. NgoNovemba, uGeorgina Rodriguez othandekayo kaRonaldo wazala indodakazi yakhe.
Ehlobo, umculi uBeyoncé wabeletha umyeni wakhe, umrepha uJay Z, amawele. Isikhathi eside, lo mbhangqwana wafihla leli qiniso, kodwa umculi wabe esefaka isithombe ku-Instagram.
Okwesibili waba ngubaba ngo-2017, umsunguli we-social network Facebook, uMark Zuckerberg. Umcimbi ojabulisayo wenzeka ngo-Agasti 29.
Kuyoba okuthakazelisayo kuwe: izigaba ezingu-7 zothando lwabesilisa
Ukuvimbela isifo sohlangothi: Izinyathelo ezingu-9 wonke umuntu angazithatha
Izigidi ezimbalwa zabantu zibulawa isifo sohlangothi unyaka ngamunye. Ukuze ungabi phakathi kwabo, kubalulekile ukulandela imithetho elula yokuvimbela isifo sohlangothi. Udokotela wezinzwa utshele mayelana nezinyathelo ezingu-9 endleleni eya empilweni